I-King Studio - Ngqo Ngaphesheya Kolwandle! (K) - I-Airbnb
I-King Studio - Ngqo Ngaphesheya Kolwandle! (K)
Fort Lauderdale, Florida, i-United States
Igumbi e-i-boutique hotel ibungazwe ngu-Matt
Siyihhotela elincane elingaphambi kolwandle elise-Fort Lauderdale Beach. Siseduze ne-Las Olas futhi kwesokudla ku-A1A (i-beach boulevard). Sinezinhlobo eziningi zamakamelo, futhi indawo yethu ngokwayo iyindawo eyodwa ewela ulwandle. Sinophahla oluvulekile oluvulekile kuze kube ngu-10pm, i-patio evulekile evulekile 24/7, futhi impahla yethu ivikelekile. Sithengisa iwayini nobhiya edeskini, futhi sinikeza amagiya olwandle amahhala, i-wifi yamahhala, nezindawo zokupaka mahhala. Siyihhotela elithule nelinokhiye ophansi. Amabha nezindawo zokudlela ebangeni lokuhamba. Kufanele ube ngu-25 ukuze uhlale!
Lolu hlobo lwegumbi luyisabelomali sethu esijwayelekile segumbi le-KING. Akulona igumbi elikhulu kakhulu esinalo endaweni, kodwa lithengiswa nsuku zonke njengoba izivakashi zithanda indawo yethu futhi ziphuma edolobheni elisogwini. Igumbi ngokwalo alibhekene nolwandle, kodwa isakhiwo sethu sibhekene naso futhi sitholakala ngaphesheya kolwandle. Igumbi linombhede omkhulu wenkosi, i-TV, igumbi lokugezela, ideski lomsebenzi, isitulo segumbi lokuphumula, i-dresser, ifriji, umenzi wekhofi.
Ilungele abavakashi abafuna indawo yestudiyo epholile, kanye nabantu abafuna ukugxumagxuma bezungeza idolobha lolwandle. Ukuqashwa kwamabhayisikili kuseduze, ukuqashwa kwe-jet ski ngaphesheya komgwaqo. Ungakwazi ukuhambahamba ngezinyawo, noma ugxumele "kuma-bar hoppers" asekelwe kumathiphu nje kuphela aweluliwe ama-caddy wegalofu, noma uthathe inqola yelanga. Indawo yokudlela yaseCasablanca ingumakhelwane futhi inokudla okumnandi. Indawo yasolwandle iyisikhungo sokuthenga esincane esingamabhuloki amathathu phansi no-ayisikhilimu, ukudla kanye ne-CVS.
4.77 out of 5 stars from 555 reviews
4.77 · 555 okushiwo abanye
Umakhelwane uphumule kakhulu futhi indawo ingaphansi kwezinyathelo eziyikhulu ukusuka olwandle njengoba izithombe zibonisa. Ihhotela linomoya ohelezayo osuka olwandle. Uphahla luyashisa kodwa sinezambulela ezinkulu. Kunezindawo zokudlela eziningana namabha ngaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. I-Las Olas Boulevard iqhele ngekota futhi inezindawo zokudlela ezingaphezu kwe-100, amabha, nezitolo zokuthenga ezizozihlola. Ezinye zezitolo ezinhle kakhulu eSouth Florida! I-Hugh Taylor Birch State Park iphezulu komgwaqo. Ungagxumela ohambweni lwamatekisi lwamanzi lwendlela yamanzi e-intercostal ukuze uhlole izintuba zamanzi ngakolunye uhlangothi lwe-A1A. Itheminali ye-Cruise port iseduze kakhulu, isikhumulo sezindiza siqhele ngemizuzu eyishumi. Okokuthutha ungaqasha ibhayisikili, ushayele i-Uber/Lyft, ugxume ku-bar hopper mahhala, noma uthathe i-Sun Trolley.
Ihhovisi livalwa ebusuku kodwa akusekho ucingo olulodwa futhi abaphathi bahlala eduze. Impahla ikhiywa futhi ivikelekile ngemuva kokuvalwa kwehhovisi. Inkonzo yasekamelweni ayitholakali kodwa phakathi nosuku singaletha amathawula engeziwe, amashidi, i-ayina, nezinto ezincane ze-misc. Iwayini likabhiya kanye ne-champagne zingathengwa ehhovisi. Siyakuthanda ukuhlangana nokuxhumana nezivakashi futhi sizungeza usuku lonke ukuze siphendule imibuzo. Ungalokothi ungabaze ukuxhumana nathi ngenkathi uhlala!
Ihhovisi livalwa ebusuku kodwa akusekho ucingo olulodwa futhi abaphathi bahlala eduze. Impahla ikhiywa futhi ivikelekile ngemuva kokuvalwa kwehhovisi. Inkonzo yasekamelweni ayithol…
Hlola ezinye izinketho ezise- Fort Lauderdale namaphethelo